नायिका रिमा विश्वकर्मा त’नावमा ! – Nepali Update
नायिका रिमा विश्वकर्मा त’नावमा !
काठमाडौ । नायिका तथा मोडल रिमा विश्वकर्मा अहिले नेपालको पहिलो कमेडी रि’यालिटी शो ‘कमेडियन च्या’म्पियन’ होष्ट गर्नमा व्य’स्त रहेकी छिन् । उक्त शोको निर्माता समेत रहेकी रिमा भने हिजो शो’को शु’टिङ्ग सेटमा भने त’नावमा भेटीइन । रिमाको त’नावको कारण उनको फोन भएको छ । दुई दिन अघि उनको फोन ह’राएको कारण रिमा अहिले त’नावमा छिन् । शोमा भन्दा ब’ढी उनि अहिले उक्त फोन भेट्ने मान्छेलाई खो’ज्न दौड धु’प ग’रिरहेकी छिन् ।
फोनमात्र ह’राएको भए उनको त’नाव ब’ढ्दैन थियो तर फोन भे’ट्ने व्यक्ति द्वारा उनको फेसबुक देखि इन्स्टाग्राम ए’काउण्टपनि ह्या’क भएको कारण रिमा विश्वकर्मा अहिले त’नावमा छिन् । उनको सा’माजिक सं’जालका ए’काउण्ट अहिले उनको नि’यन्त्रणमा नरहेको कारण कत्तै केहि ग’लत म्यासेज वा पोष्ट नहोस भन्ने स’तर्कता अ’पनाउन रिमा अहिले प्रहरी स’मक्ष स’हयोगलाई समेत पु’गेकी छिन् ।
रिमाको मोबाईल ह’राएको र सामाजिक संजालका ए’काउण्ट ह्या’क भएको कुरा उनको मिल्ने साथि केकी अधिकारीले समेत पुष्टि गरेकी छिन् । कमेडी च्या’म्पियनको आ’गामी शोको शु’टिङ्ग सेटमा सबै जना रिमाको लागि चि’न्तित समेत भेटिए भने उता रिमा अहिले यहि काममा दौ’डधुप गरिरहेकी छिन् ।रिमा विश्वकर्माले नेपाल आईडलको दुई सि’जन होष्ट गरेपछि कमेडी च्याम्पियन शोको होष्ट गर्न थालेकी छिन् ।
जीवन बिताउनु र जीवन बाँच्नु फरक कुरा हुन् । जीवन कसरी बाँ’चिन्छ, त्यो विरलै मानिसलाई मात्र थाहा होला । अन्यथा अनेक प्रपञ्चले जीवन बितिरहेको छ तर बाँचिएको छैन । जीवनमा भित्रबाट आनन्द अनुभूति नभएसम्म भय, लोभ, देखावटी र संशयमा जीवन बितिरहेको हुन्छ । भौतिक सम्पन्नता, नाम र पद्वीका लागि कठिन विधिहरू होलान्, जीवन बाँच्नका लागि तर आनन्दित जीवन बाँ’च्ने हो भने सरल सूत्रहरू अपनाए पुग्छ । स्वस्थ जी’वनशैली, सेवापूर्ण भाव र अ’विचलित मन नै आनन्दित जीवन बाँच्ने तरिका हुन् ।